App Ops - Permission manager 3.1.1.r956.eec61b4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.1.1.r956.eec61b4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား App Ops - Permission manager
App Ops - Permission manager ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့ device ကိုအမြစ်တွယ်နေသည်လျှင်, သင်တိုက်ရိုက်ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ device ကိုပြေး ကို Android 5.0 သို့မဟုတ် 5.1 နှင့်အမြစ်တွယ်မဟုတ် အကယ်. ကြောင့် Android ရဲ့ကန့်သတ်မှဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့မတတျနိုငျသောကွောငျ့, ဒေါင်းလုဒ်မဆွဲကြဘူးပါ။
အမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့်အထက်ကို Android 6.0 နှင့်ပြေးမရလျှင်သင် adb (က Android Debug Bridge ကို) ကဒီ app ကိုသုံးနိုငျ, ဒါပေမယ့်ဒီကွန်ပျူတာဆက်သွယ်မှုများနှင့်နည်းနည်းဒုက္ခ setup ကိုခြေလှမ်းများကိုတောင်းဒေါင်းလုပ်မတိုင်မီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ဖတ်ရှုပါ။
ထောကျပံ့ပေး Non-အမြစ်တွယ် devices တွေကို (က Android 6.0+ နှင့် adb လိုအပ်)
ပံ့ပိုးမှု Lollipop, Marshmallow, Nougat နှင့် Oreo
non-အမြစ်အသုံးပြုမှု Shizuku Manager ကို (https://play.google.com/store/apps/details?id=moe.shizuku.privileged.api) လို့ခေါ်တဲ့အခြား app ကိုတောင်းအပြည့်အဝ setup ကိုခြေလှမ်းများထို app များ၏ဖော်ပြချက်၌ရှိကြ၏။
App ကို Ops ပျောက်ဆုံး CJK ဘာသာစကား font ကိုပေးတော်မူသောစာလုံး Provider (https://github.com/RikkaApps/FontProvider) လို့ခေါ်တဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုသုံးခြင်းနှင့်ကြောင့် API ကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့အောက်ပါ 6.0 နှင့်ပေါ်သိုလှောခွင့်ပြုချက်ရသည်။
ဒါဟာ optional ကိုဖွင့်, သင်က Android 6.0 ကိုအသုံးပြုနေလျှင်သင် ကျနော်တို့ကမေတ္တာရပ်ခံဘယ်တော့မှ တွေ့နိုင်ပါသည်။
stand-alone လိုလားသူဗားရှင်း (https://play.google.com/store/apps/details?id=rikka.appops.pro) ယခုကန့်ကွက်ခံထားသည်။ သင်ဝယ်ယူကြလျှင် support@rikka.app ဖို့နဲ့ကျနော်တို့ကိုသင်ရွေးနှုတ်တော်မူကုဒ်အခမဲ့ဗားရှင်းပေးပို့ပါလိမ့်မယ် (နှင့်အတူစတင် "GPA ။ " Google ထံမှအီးမေးလ်တှငျတှေ့ Play သို့မဟုတ် pay.google.com) သင့်အမိန့်အိုင်ဒီပေးပို့နိုင်ပါသည်။
App Ops - Permission manager အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
App Ops - Permission manager အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
App Ops - Permission manager အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
App Ops - Permission manager အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 48.99k 21.24M
App Ops - Permission manager ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း App Ops - Permission manager အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.1.1.r956.eec61b4
လက်မှတ် SHA1: 29:00:B8:E7:62:73:75:49:D6:3C:41:05:69:06:B5:CD:AE:EF:6E:18
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Rikka
App Ops - Permission manager APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ